?Muqdisho waxaan ka dhisi doonaa goobo waxbarasho iyo goobo caafimaad, dib u dhiska dalka Soomaaliyana door wacan ayaan ka qaadan doona? R/wasaare ku xiggeenka Turkiga. – Radio Daljir
Moqdisho, Nov, 27 ? Raysal-wasaare kuxiggeenka dalka Turkiga Bakiir Basaay ayaa shaaca ka qaaday in dawladiisu ay mashaariic hormarineed oo u badan dhanka waxbarashada ka fulin doonto gudaha dalka Soomaaliya. Waxaana uu hadalkiisa raaciyay sidoo kale inay dhisi doonaan goobo caafimaad oo ka haqabtira bulshada Soomaaliyeed adeegyo badan.
Mr Bakiir Basaay, waxaa uu intaasi ku daray in xukuumaddiisu ay diyaar u tahay sidii ay door-wacan uga ciyaari lahayd dib-udhiska dalka Soomaaliya, oo beesha caalamku hadda u soo jeesatay.
R/wasaare kuxigeenku waxa uu tilmaamay in mashaariicda ay Soomaaliya ka wadaan in tahay mid ballaaran oo la gaarsiinayo guud ahaan gobollada dalka oo dhan, waxaana uu xusay in mashaariic badan ay xilligaan gabo gabo u marayaan, isagoo tusaale u soo qaatay sida quudinta iyo waxayaabo kale.
Dawladda Turkiga oo aan lagu arag masraxa siyaasadda Soomaaliya mudadii dalku uu burburka ku jiray, ayaa lagu ammaani karaa dadaalka xooggan ay dalka Soomaaliya u galeen labadii sano ee ugu dambeeyay, waxaana dadaaladu isugu jiraan dhinacyada fursadaha waxbarasho ee dalka dibbadiisa ah, iyo qaliimaha bilaash-ka ah ee dhanka caafimaadka.